အချစ်ရေး | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 2
ကိုယ့်ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို စွန့်ပစ်ဖို့ဘာလို့ရွေးချယ်သွားသလဲဆိုတာ သိပ်ကို သိချင်ကြမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်မထင်ထားလောက်တဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းကလေးက ကိုယ့်အနားကနေစွန့်ခွာသွားတတ်ကြပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာသူသိပ်ချစ်တဲ့သူကို စွန့်ခွာဖို့ ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်(ခြံခုန်ချင်သူအသာယာတဲ့နောက်လိုက်သူတွေကိုထည့်မပြောဘူးနော်)
(၁) သူ့အတွက်မင်းက မေတ္တာစေတနာအစစ်ကို မပေးတတ်လို့
(၃) မင်းရဲ့အချစ်တွေအားလုံးကို မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့သူတစ်ယောက်တည်းပိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခံစားရခြင်းမရှိလို့
(၅) သူ့ဘက်ကပေးဆပ်သလောက် မင်းက ဘာမှတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိလို့
(၆) မင်းအကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူပိုပြီး မသိနားမလည်ဖြစ်လာလို့(မင်းစိတ်ကသူ့အတွက်ခန့်မှန်းရခက်လို့)
(၇) အပေါင်းသင်းကြားမင်းဟာသူ့အတွက် ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့် အကောင်းမြင်စရာတစ်ခုမှမရှိလို့
(၈) နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မင်းကို ချစ်ဖို့ကြောက်ရွံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်
ကိုယျ့ကိုသိပျခဈြတဲ့ မိနျးမတဈယောကျက ကိုယျ့ကို စှနျ့ပဈဖို့ဘာလို့ရှေးခယျြသှားသလဲဆိုတာ သိပျကို သိခငျြကွမှာပါ။ တဈခါတဈလမှော ကိုယျမထငျထားလောကျတဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူမိနျးကလေးက ကိုယျ့အနားကနစှေနျ့ခှာသှားတတျကွပါတယျ။
မိနျးကလေးတဈယောကျဟာသူသိပျခဈြတဲ့သူကို စှနျ့ခှာဖို့ ခကျခဲတတျကွပါတယျ(ခွံခုနျခငျြသူအသာယာတဲ့နောကျလိုကျသူတှကေိုထညျ့မပွောဘူးနျော)
(၁) သူ့အတှကျမငျးက မတ်ေတာစတေနာအစဈကို မပေးတတျလို့
(၃) မငျးရဲ့အခဈြတှအေားလုံးကို မိနျးမတဈယောကျအနနေဲ့သူတဈယောကျတညျးပိုငျတယျလို့ယုံကွညျခံစားရခွငျးမရှိလို့
(၅) သူ့ဘကျကပေးဆပျသလောကျ မငျးက ဘာမှတုနျ့ပွနျခွငျးမရှိလို့
(၆) မငျးအကွောငျးကိုတဖွညျးဖွညျးနဲ့သူပိုပွီး မသိနားမလညျဖွဈလာလို့(မငျးစိတျကသူ့အတှကျခနျ့မှနျးရခကျလို့)
(၇) အပေါငျးသငျးကွားမငျးဟာသူ့အတှကျ ဘယျဘကျကပဲကွညျ့ကွညျ့ အကောငျးမွငျစရာတဈခုမှမရှိလို့
(၈) နောကျဆုံးတဈခကျြကတော့မငျးကို ခဈြဖို့ကွောကျရှံ့သှားတာဖွဈပါတယျ
မိန်းကလေးတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာဖို့ ၅၀%လောက်ဟာ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အမျိုးသားနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လာရင် တော်တော်များများက ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုပြီးလေးလေးနက်နက်တွေးတတ်ကြတာသဘာဝပါ။ ချစ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုလည်း အကြီးအကျယ်ခံစားတတ် Ro တတ်ကြတာမိန်းကလေးတို့သဘာဝပါပဲ။
ဒါပင်မဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အသိသာကြီးတွေ့ရမှာပါ…လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကျင်လည်နေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာ အမြဲလန်းဆန်းတတ်ကြွပြီး လူတိုင်းနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ် အဆင်ပြေနေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့အချစ်ရေးမှာအဆင်ပြေနေကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။( ရည်းစားမရှိသူတွေမပါ :-P)
ဘယ်အရာမှာ မမြဲဘူးဆိုတာတော့ မှန်ပင်မဲ့ လက်ရှိမှာ နာက်ဆံတင်းစရာမလိုတဲ့ RS မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ သူ့ဘ၀အတွက်ပိုပြီးကြိုးစားဖို့အချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဲက စိတ်ကောက်နေမလား၊ ကိုယ့်ချစ်သူကအထင်လွဲနေမလား၊ သူငါမအားတုန်းဘယ်သူနဲ့ ပျော်နေတုန်း ငါနဲ့အနေဝေးနေလို့များငါ့မေ့သွားမလား စသဖြင့်ယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့ RS Life မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ သူတွေကတော့ တစ်နေရာရာမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ထူးချွန်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ်။ နားလည်မှုမရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက် သစ္စာမရှိပဲ တည်ကြည်မှုမရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သတ်ရတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ လက်ဆောင်တွေရရ ဘယ်လို Surprise မျိုးပဲရရ တကယ့် ပျော်ရွှင်မှုအစစ်မှန်ရတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် နောက်ဆံမတင်းနဲ့ Relationship မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ဘ၀မှာ တစ်မျိုး ဘ၀ပေးကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေလို့ ဆိုရမှာပါပဲ…
မိနျးကလေးတဈယောကျ စိတျခမျြးသာဖို့ ၅၀%လောကျဟာ သူနဲ့ပတျသတျတဲ့အမြိုးသားနဲ့သကျဆိုငျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှဟော အခဈြရေးနဲ့ပတျသတျလာရငျ တျောတျောမြားမြားက ယောကျြားလေးတှထေကျပိုပွီးလေးလေးနကျနကျတှေးတတျကွတာသဘာဝပါ။ ခဈြတယျဆိုတာကွီးကိုလညျး အကွီးအကယျြခံစားတတျ Ro တတျကွတာမိနျးကလေးတို့သဘာဝပါပဲ။
ဒါပငျမဲ့ ယှဉျကွညျ့လိုကျရငျ အသိသာကွီးတှရေ့မှာပါ…လုပျငနျးခှငျမှာပဲဖွဈဖွဈကောငြျးမှာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက ကငျြလညျနကွေတဲ့မိနျးကလေးတှထေဲမှာ အမွဲလနျးဆနျးတတျကွှပွီး လူတိုငျးနဲ့ပွောတတျဆိုတတျ အဆငျပွနေတေတျတဲ့မိနျးကလေးတှဟော သူတို့အခဈြရေးမှာအဆငျပွနေကွေတဲ့သူတှမြေားပါတယျ။( ရညျးစားမရှိသူတှမေပါ :-P)
ဘယျအရာမှာ မမွဲဘူးဆိုတာတော့ မှနျပငျမဲ့ လကျရှိမှာ နာကျဆံတငျးစရာမလိုတဲ့ RS မြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားရတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော သူ့ဘဝအတှကျပိုပွီးကွိုးစားဖို့အခြိနျပေးနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ဘဲက စိတျကောကျနမေလား၊ ကိုယျ့ခဈြသူကအထငျလှဲနမေလား၊ သူငါမအားတုနျးဘယျသူနဲ့ ပြျောနတေုနျး ငါနဲ့အနဝေေးနလေို့မြားငါ့မသှေ့ားမလား စသဖွငျ့ယုံကွညျမှုအားနညျးတဲ့ RS Life မြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားရတဲ့ သူတှကေတော့ တဈနရောရာမှာ အဆငျပွပွေနေဲ့ ထူးခြှနျအောငျမွငျစှာလုပျဆောငျနိုငျဖို့ ခကျခဲလှပါတယျ။ နားလညျမှုမရှိတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျ သစ်စာမရှိပဲ တညျကွညျမှုမရှိတဲ့ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ပတျသတျရတဲ့ မိနျးကလေးဟာ ဘယျလောကျပဲ လကျဆောငျတှရေရ ဘယျလို Surprise မြိုးပဲရရ တကယျ့ ပြျောရှငျမှုအစဈမှနျရတဲ့ မိနျးကလေးမြိုးမဖွဈလာနိုငျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ နောကျဆံမတငျးနဲ့ Relationship မြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားရတဲ့မိနျးကလေးတှဟော ဘဝမှာ တဈမြိုး ဘဝပေးကောငျးတဲ့ မိနျးကလေးတှလေို့ ဆိုရမှာပါပဲ…
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက် က မိန်းကလေး တစ်ယေက်ကို ပိုးပန်းပြီး ချစ်ရေးဆိုတဲ့အခါမှာ ငြင်းပယ်ခံရတယ်ဆိုတာဟာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးတာကတော့ ထို ငြင်းပယ်ခံရခြင်း တွေဆီကနေ အတွေ့အကြုံယူ သင်ကြားဖို့ပါပဲ။ အဲဒါမှသာ ပြင်ဆင်သင့်တာကို ပြင်ဆင်ပြီး လူပျိုကြီး အဖြစ် အရိုးထုတ်ရမယ့် အခြေအနေက လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်မှာပါ။ သူမ ဘာလို့ သင့် ချဉ်းကပ်မှုတွေကို ငြင်းပယ်ခဲ့တာလည်း။ ဘာတွေမှားနေလို့လည်း?ဒီထက်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စသဖြင့် စဉ်းစားရမှာပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှု ကို ငြင်းပယ်ရတဲ့ ယေဘူယျ အကြောင်းအရင်း တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁။ သူ့မှာ ချစ်ရတဲ့သူရှိနေလို့ပါသူ့မှာ ချစ်သူကောင်လေး ရှိနေမယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြိတ်ကြွေနေမယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ရည်းစားဟောင်း ကို မမေ့နိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့် ချဉ်းကပ်မှုတွေကို သူမ ဘက်က လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။၂။ သင့်အကြည့်တွေက သူမအတွက် မတိုးလို့ပါတစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သူမလိုချင်တဲ့ ယောကျာင်္းလေး အမျိုးအစားထဲက မဟုတ်လို့ပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဂျော့ဂ်ျ ကလူးနေး တို့ ၊ ဘရက်ပစ် တို့လို ချောမောခန့်ညားနေဖို့ မလိုပေမယ့် ကောင်းမွန်စွာ ၀တ်စား တတ်ဖို့ ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့ ရှိဖို့ နဲ့ စမတ်ကျကျ နေထိုင်တတ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။၃။ သင့်ချဉ်းကပ်မှုတွေက သူမ ကို အာရုံနောက်စေလို့ပါကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ပိုးပန်းဖို့ ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ရပါတယ်။ ပထမဆုံး စကားသွားပြောတဲ့အချိန်မှာ သူမက စိတ်ရှု့ပ်နေတဲ့အချိန် မျိုးနဲ့ ကြုံရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် စကားသွားပြောရင်လည်း ထပ်ပြီး ငြင်းပယ်ခံရနိုင်ပါတယ်။၄။ သူမကို အလေးထားကြောင်း မပြသနိုင်တဲ့အခါသူမဘက်က စကားတွေ ပြန်ပြောနေပေမယ့်လည်း သင်က ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေအပေါ်ပဲ စိတ်ရောက်နေမယ် ဆိုရင်တော့ သူမရဲ့  စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် သူမရဲ့  အကြောင်းတွေကို မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်လည်း သူမဘက်က ပြန်လည် ပြောပြတဲ့အခါမှာ အာရုံစိုက်နားထောင်နေဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ သူမဘက်က သင့်ရဲ့  အလေးထားမှုကို ခံစားမိမှာပါ။၅။ သင့်မှာ နာမည်ပျက်ရှိနေတဲ့အခါသင်ဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြစ်စေ ၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ ဖြစ်စေ မကောင်းတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာကို ကောင်မလေးဘက်က သိထားတယ်ဆိုရင် သင့်ချဉ်းကပ်မှုတွေကို သူမက အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းကတော့ သူမကြားထားတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်တဲ့အရာတွေကို သူမ မြင်သာ အောင် လုပ်ပြဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။၆။ သင်ဟာ သူမကို အပျော်ကြံနေမှန်း ရုပ်ပေါက်တဲ့အခါဒါကိုတော့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ သင် အပျော်ကြံဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မိန်းကလေး ကသင့်ချဉ်းကပ်မှုကို ငြင်းပယ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်လူမှားပြီး အပျော်ကြံမိသွားပါပြီ။Ref:elitedaily
အမျိုးသမီးတွေ အချစ်ကို စိတ်ကုန်သွားကြရတာဟာ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပါ
ထိလွယ် ၊ ရှလွယ် ၊ ခံစားလွယ်တတ်တဲ့ သူမတို့ဟာ အချစ်ကိုလည်း ဘ၀တစ်ခုရဲ့ အရှင်သခင်အလား ကိုးကွယ်တတ်ကြပါတယ်။ ချစ်မိတဲ့အခါ အများကြီးလည်း ချစ်တတ်ကြသလို အများကြီးလည်း မျှော်လင့်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးထားမိတဲ့အတွက် ရသမျှနဲ့ မရောင်ရဲနိုင်ဘဲ မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ လွဲတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို အချစ်ကို တဖြည်းဖြည်း စိတ်ကုန်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ စွန့်ခွာသွားမိကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် သူမတို့အတွက် ချစ်ခြင်းတစ်ခုလုံး ဆိတ်သုဉ်းပျက်စီးသွားစေနိုင်တာ ဘယ်လို အရာမျိုးပါလိမ့်လို့ အဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သိပ်မကြီးမားတဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကနေ စတင်တယ်ဆိုတာ တွေ့လာရပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို သူမ မှတ်မိနေတဲ့ ချစ်ခရီးလေးအကြောင်း မေးကြည့်ပါ။ နူးညံ့မှုတွေ ၊ သိမ်မွေ့မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ အမှတ်ရစရာတွေကိုသာ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ခံစားမှုတွေက အသစ်တွေ ၊ ထိတွေ့ခံစားရသမျှက ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ လောကကြီးက သက်တန့်ရောင်စုံနဲ့ သာယာလှပနေခဲ့တဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းရဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားလေး တစ်ခုကိုသာ သူမ ခုံမင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနေ့ရက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကိုတော့ honeymoon expire period လို့ခေါ်ပြီး တကယ့်လက်တွေ့ မိသားစုဘ၀ထဲကို နှစ်ဦးစလုံး သက်ဆင်းရတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီလိုအချိန်မှာ စတင် မွန်းကျပ်လာပြီး အချစ်ကို စိတ်ကုန် တတ်ကြပါတယ်။
သူမအပေါ် အလေးပေး ဂရုစိုက်တဲ့ ပမာဏဟာ သူမအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်လို ခံစားရစေနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီခံစားမှုကို အလွန် သာယာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ အဝေးကို ပြယ်လွင့်သွားချိန်မှာတော့ သူမဟာ အိမ်အလုပ်တွေကို စိတ်မချမ်းမြေ့တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူမလို အဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့ တခြား မိသားစုတွေရော ရှိလားလို့ ရှာဖွေနေပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အချိန်တိုင်းမှာ စိတ်ခံစား တက်ကြွမှုကို တူညီတဲ့ ပမာဏနဲ့ ခံစားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူမတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုဟာ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်နေလို့ပါပဲ။ သူမအမျိုးသားရဲ့ သူမအပေါ် တပ်မက်မှုဟာ သူမအတွက်တော့ ဆုလာဒ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီအမူအရာတွေ ပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ သူမဟာ အချစ်ကို စတင်စိတ်ကုန်လာပါပြီ။
ပိုးပန်းချိန်ကာလက ချစ်ခြင်းရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ အလွန်ပဲမြင့်မားနေတဲ့အခါ သူမရဲ့ “ဘာမှမရှိတဲ့” နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသွားချိန်မှာ ကနဦးလတစ်ခုရဲ့ အစပိုင်းအချိန်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေတတ်ပါတယ်။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ ၀ုန်းဝုန်ဒိုင်းဒိုင်း ဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေ သူ့ဆီမှာ ပျောက်ဆုံးသွားပြီး သူမကိုဆက်ဆံပုံဟာ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အလုပ်တွေအပေါ် ဆက်ဆံသလိုမျိုး အလေ့အထတစ်ခုလို ပျင်းတွဲတွဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဟာ ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲလောက်မှ သူမအပေါ် အာရုံမလာဘဲ သဲကြီးမဲကြီး ကြည့်ရှုနေချိန်မျိုးမှာ ထောင့်လေးတစ်နေရာမှာ သူမဟာ ငြိမ်သက်စွာ ကြေကွဲ ခံစားမိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူမအချစ်ကို စတင်စိတ်ကုန်တာပါပဲ။
အမျိုးသားတွေက အနီးနားမှာ အဖော်ရှိနေရုံလောက်နဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေကတော့ သူမတို့တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ မခံစားရတတ်ပါဘူး။ ရှိရုံ ရှိနေတာဟာ သူမတို့အတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒီလို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဝေမျှခြင်းတွေ ပြတ်တောက်သွားချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူမတို့ရဲ့ချစ်ခရီးလမ်း အဆုံးသတ်နေပြီလို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ သစ်ကိုင်းခြောက်လေးလိုပဲ ကျိုးပဲ့လွယ်ပါတယ်။ အရာရာကို အမျိုးသားများထက်ပိုပြီး နက်ရှိုင်းစွာ ခံစားမိတဲ့အတွက် အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံပေမယ့်လဲ အချစ်ကို သူမစွန့်ခွာသွားပါလိမ့်မယ်။
မဖြစ်နိုင်ဘူး မချစ်နိုင်ဘူး (ချစ်သူအတည်တကျထားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ သူတွေဆိုတာ )
ယောက်ကျားလေးတွေတင် အတည်တကျချစ်သူထားဖို့ဝန်လေးကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့မိန်းကလေးတွေလည်း အချိန်တွေအကြာကြီးတွဲပြီးဘာမှအဖတ်မတင် အချိ်န်ကုန်ခံစားချက်တွေအလဟဿဖြစ်ရတဲ့ အချစ်ရေးမျိုးကို မြင်ယောင်ပြီး အတည်တကျချစ်သူထားချင်စိတ်ကုန်ခမ်းနေကြတာမျိုးရှိပါတယ်။ ချစ်သူအတည်တကျထားဖို့မဖြစ်နိုင်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားနဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကတော့….
ဒီစကားကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောဖူးကြမှာပါ။ Social able မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲ ဘာလုပ်လုပ်လှမ်းလှမ်းပြီးသံတော်ဦးတင်နေရမှာကို မနှစ်မြို့တာပါ။ အဲလိုပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်က အနားမှာ တစ်ချိန်လုံး(တစ်သက်လုံးဆိုပိုဆိုးမယ်) တကပ်ကပ်နဲ့ရှိနေမှာ၊လူတွေက ကိုယ်နဲ့သူ့ကိုတွဲမြင်ကြမှာ ( သူနဲ့ပြတ်သွားရင် အားနေလာမေးနေတဲ့လူတွေကို ဖြေရခက်ဦးမယ်) အဲဒါတွေကို မကြိုက်တာပါ။
အဲဒါပြဿနာပဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို အသည်းအသန် crush ပြီိဆိုပါစို့။ အဲ့တစ်ယောက်ယောက်က သတိထားမိပြီးပြန်ကြိုက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်ကပတ်ပြေးတော့တာပဲ။ အဲ… သတိမထားမိဘူး၊ သတိထားမိလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး ချေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပျင်းလာပြီး နောက်တစ်ယောက်ပြောင်း crush ပါလေရော။
ဘယ်လိုမှ ညှိမရတဲ့ပြဿနာတွေရှိတာ (ချေးများတာ)
အရပ်ရှည်မှ၊ကြည့်ကောင်းမှ၊အသားဖြူမှ၊ပိန်ရင်မကြိုက်ဘူး၊ဝရင်မကြိုက်ဘူး၊တက်တူးတွေဆိုရင်နိုးပါ (လူက အရမ်းတွေစိတ်ထားကောင်းနေရင်တော့ ချွင်းချက်လေးပေးမလားစဉ်းစားမိတာပဲပေါ့လေ)။စတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစလို့ စိတ်ရှည်မှ၊ဒေါသမကြီးရဘူး၊ သဘောကောင်းရမယ်၊ အနွံအတာခံရမယ် စတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရော၊ ဘွဲ့ကဘယ်နှစ်ဘွဲ့ရမှ ကိုယ်မသိတာတွေသေချာရှင်းပြနိုင်ရမယ်၊ရှင်းပြချင်စိတ်လည်းရှိရမယ်၊ ဟင်းချက်တတ်ရမယ်၊အကြောမတင်းရဘူး၊မဟာပုရိသဝါဒကြီးလက်ကိုင်ထားပြီး မိန်းမတွေက ယောက်ကျားတွေထက်နိမ့်ကျတယ်လို့တွေးထင်နေရင်တော့ လာရာလမ်းအတိုင်းသားပြန်လည်ကြွမြန်းပါတော့၊နှုတ်သီးခေါင်း လျှာပါး စကားနုိင်မလ
မလုရဘူး၊ အလျှော့ပေးတတ်ရမယ်၊ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရမယ်၊ နားလည်နိုင်စွမ်းကြီးမားရမယ်၊ ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့နယ်ပယ်မှာ အကောင်မဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ့်ကျောင်းက စာတမ်းတွေလောက်တော့ ကူရေးပေးနိုင်ရမယ်၊ စတဲ့ အတတ်ပညာအရည်အချင်းတွေပါအပါအဝင်၊ စာဖတ်ဝါသနာပါသူဖြစ်ရမယ်၊ ကိုယ်နဲ့ဖတ်ပြီးသမျှစာအုပ်တွေအကြောင်း အပြန်အလှန်ပြောနိုင်ရမယ် (ဒါပေမယ့် ဆရာကြီိးမလုပ်ရဘူး) ၊ စာအုပ်ဈေးပွဲတော်တွေ စာဖတ်ပွဲတွေ ကိုယ်နဲ့အတူသွားနိုင်ရမယ်၊အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြောရယ်မောနိုင်ရမယ် (ဘယ့်နှယ် ကိုယ်က စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေချိန် သူက တခေါခေါနဲ့အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲအလည်သွားနေတာမျိုးတော့ အဲဒီ့နေ့တင် နေ့ချင်းပြန်
ဖြတ်တယ်) ဆိုသလိုများပြားလှပြီး ကိုယ့်အတွက်တကယ်လည်းလိုအပ်တာကြောင့်တစ်ပြားသားမှမလျှော့ပေးနိုင်တဲ့ စံနှုန်းထားတွေ ရှိနေတာမျိုး။ (ဒီလောက်များမှတော့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့တော့ ငြိမှာပဲလေ :3 )
ဟုတ်ပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားထားတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်အချိ်န်ကိုတစ်ယောက်က ဓားပြတိုက်ပြီိးယူနေကြတာပါပဲ။ နားချိ်န်တွေအိပ်ချိ်န်တွေ (ညနက်တွေဖုန်းပြောနေရတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားမယ့်စားမယ့်အချိ်န်တွေသူ့အတွက်ပဲပေးထားနေရတာ) ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတွေ့ဖို့အရေး သူ့ဆီကပါမစ်တောင်းနေရတာမျိုးတွေကို သိပ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ချူပ်ချယ်ခြင်းတွေလို့ပဲမြင်တာပါ။ သွားပြီပဲထားပါဦး ဘယ်ရောက်ပြီနော် ဘာစားနေတာနဲ့ လမ်းမှာဖုန်းထထဆက်နေတာတွေကလည်း ဘာအလုပ်မှန်းမသိပါဘူး ( အဲလိုလုပ်နေတဲ့ အတွဲတွေကိုနားကိုမလည်နိုင်၊ မသိရင် လူရိုက်မှုတို့ ရန်ဖြစ်ထားလို့ ရဲစခန်းမှာ ခံဝန်ထိုးထားရတာတို့အတွက် ဖုန်းဆက်ဆက်ပြီး သတင်းပို့နေရသလိုပဲ :3 )
ဒါကတော့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေမှာအဖြစ်များတာပေါ့လေ ( အယ်လဲ့) တစ်ခုခုဝယ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လောက်ကို အရင်တိုင်ပင်ပြီး approval စောင့်နေရတာမျိုးကို စိတ်မရှည်သလို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ချလိုက်ပြီ့းမှအပြစ်လာပြောမှာကိုလည်းသိပ်မုန်းတဲ့ အကျင့်ရှိတာပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုယ်လုပ်မယ် ဘာမှလာမစွက်ဖက်နဲ့ဆိုတာမျိုး။ ဒါမျိုးက ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်တတ်တာဖြစ်ပြီး မင်းသမီးလေးလို အိစိအိစိနဲ့ကိုကို့သဘောဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်တွေနဲ့တော့ ဘယ်တူပါ့မလဲပေါ့နော်။
အဲဒီအရာက အဖေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊အမေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊အစ်ကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ Celebrities တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်။ အဲဒီအရာကို လာထိလို့ကတော့ မီးပွင့်သွားမယ်၊စက္ကန့််ဝက်အတွင်းပြာကျသွားမယ်၊မျက်နှာမမြင်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပါ။
ဘဝကိုဖြတ်သန်းဖို့ အဖော်တစ်ယောက်မလိုပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းပဲ အလုပ်အေးတယ်၊နားအေးပါးအေးရှိတယ်လို့တွေးပါတယ်။ ဘယ်သူ့အပေါ်မှ အမှီပြုဖို့စိတ်ကူးမရှိပဲ အလုပ်လုပ်နိုင်သလောက်နေမယ် မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင်သေပစ်လိုက်မယ်လို့တွေးတဲ့ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ပြည့်စုံနေသူတွေပါ။
ဒီလိုလူတွေကိုသင်ကြိုက်မိရင်တော့ ကျောက်ခဲအရေညှစ်တာမှ ကြာရင်ထွက်ဦးမယ် သူတို့ပြန်ချစ်ဖို့ကတော့လမ်းမမြင်ဆိုတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့က တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအပျော်တွဲဖို့လောက်တောင်စိတ်မပါတဲ့ မာမာအေးတွေပါ။ သင့်အနေနဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရအောင် ကြိုးစားနေပေးရင်တော့ စိတ်ဝင်စားလာနိုင်ပေမယ့် အဲဒါက သင့်ရဲ့ပုံစံအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့တစ်နေ့ သင့်ကို နောက်လှည့်မကြည့်စတမ်း ထားပစ်ခဲ့မှာသေချာပါတယ်။
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှလက်မလွှတ်သင့်
လူတိုင်းကတော့ လှတာာမက်တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေက လှတာလေးတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ တကယ်တမ်း လက်တွဲမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ လှနေဖို့လိုအပ်သလားဆိုရင် သူတို့ကတော့ လိုတယ်လို့ပဲဖြေမှာပါပဲ။
လှတာထက် ဒီလိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကိုတော့ မင်းလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ သူတို့က တကယ်ပဲ မင်းဘဝအတွက်အထောက်ကူဖြစ်စေမယ့် ၊ လမ်းပြပေးနိုင်မယ့် မိန်းမ
မင်းချစ်တဲ့လူက ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်မယ်ထင်လား။ ပေးခဲ့ရင်လည်း ခဏပါပဲ။ ကိုယ်ကချစ်ပေမယ့်
ထင်သလောက် မပျော်ရတဲ့အချိန်တွေရှိမှာပါ။ အဓိက သူနဲ့ကိုယ်ကြားမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စတွေ
ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပေါ့။ သူ့ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ အေးချမ်းသွားတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးမိန်းကလေးတိုင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းဆီကသာ မင်းရနိုင်မှာပါ။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ရိုးသားတဲ့လူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ မရိုးသားတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အားလုံးက ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မင်းအနေနဲ့ သူ့အပေါ် မယုံရရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလည်း ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ရိုးသားသူကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒီမိန်းကလေးကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့။
ဒီလိုလူမျိုးလည်း ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှိတော့ရှိတယ်။ အရာရာတိုင်းအပေါ် အကောင်းမြင်တတ်ပြီး မနာလိုစိတ်ကင်းတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာရှားပါတယ်။ အနည်းကျဉ်းတော့ မသိစိတ်လေးမှာ အဆိုးမြင်စိတ်တွေ ပေါက်ဖွားကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း အဆိုးမြင်တတ်တဲ့မိန်းမမျိုးဆို မင်းအတွက် မွန်းကြပ်စေမှာပါ။ သူမရဲ့အပြောဆိုအောက်မှာ မင်းနေ့တိုင်း ခေါင်းကိုက်နေရပါလိမ့်မယ်။
မင်း ဘာဖြစ်ချင်လဲ ၊ ဘယ်လမ်းလျှောက်ချင်တဲ့ဆို သူမပါအတူ လမ်းဖောက်ပေးမယ့်သူမျိုးပေါ့။
ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ဘေးကနေ အားအင်အဖြစ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစား ကြိုးစား ဘေးနားက အားဖြစ်စေမယ့်
အပေါ်ယံပေါင်းသင်းတတ်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းနဲ့ ရင်ထဲကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝင်ဆံ့နိုင်အောင် ပေါင်းသင်းနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါ။ စတွေ့တာနဲ့ အပေါ်ယံကြည့် ဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ စကားတွေပြောကြည့်ပြီး အဆင်ပြေအောင် နေတတ်သူပေါ့။ ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာဟာ မင်းအတွက်ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲ။
ဒီအချက်တွေနဲ့လည်း ပြည့်စုံပြီိ။ သူမကလည်း လှတယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားကပေးတဲ့ အပိုဆုလေး
ကို မင်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါပဲ… ကဲ…. ဘာများလိုဦးမလဲ..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်ရင် ယောက်ျားတွေဘယ်အရာကို အဓိကထား ကြည့်လဲ?
ပြည့်စုံအောင် လှနေတာမျိုး မိန်းကလေးတိုင်း လိုချင်တာပေါ့။ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ ဘယ်လိုအရာတွေပေါ် အာရုံစိုက်တတ်ကြလဲ ? တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ မတူနိုင်ဘူးပေါ့လေ။ များသောအားဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘယ်နေရာ ၊ ဘာဆိုတာကို အသေးစိတ် လိုက်ကြည့်တာတော့ ရှားပါတယ်။ သူတို့ သတိထားမိတာက မျက်နှာလေးနဲ့ မင်းဘယ်လိုပုံစံ ဝတ်စားဆင်ယင်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်လေးတွေပဲ သူတို့ သတိထားကြည့်ကြတာပါပဲ။ ဗိုက်လေး ပူနေလို့ တွေ့တဲ့အခါကြ အသက်အောင့် ဗိုက်ချပ်ထားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့..
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်သင်းနံ့ မွှေးမွှေးလေး ပိုင်ဆိုင်ထားရင် သူတို့ သတိထားမိသတဲ့။
အဲ့ဒီ ကိုယ်သင်းနံ့က သူတို့နှာခေါင်းထဲမှာ စွဲနေပြီဆိုရင် အနံ့ရတာနဲ့ လူမလာသေးခင် သူတို့အနီးတစ်ဝှိက် မင်းရောက်နေပြီဆိုတာ ကြိုသိနေတယ်။ ယောက်ျားလေး တော်တော်များများ အနံ့သင်းတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ အရမ်းပြင်းတဲ့ ရေမွှေးတွေ စွတ်ထားရင်တော့ သူတို့ခေါင်းမူးတယ်။ ကြိုက်ဘူး။
သိကြတဲ့အတိုင်း မိတ်ကပ်ထူလပျစ်ကြီးတွေက သူတို့ရင်ကို ပူစေပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် မျက်နှာလေးရှင်းပြီး သူတို့ရင်ထဲ အေးချမ်းသွားမယ့် မိန်းကလေးမျိုးကို ပိုသတိထားမိကြတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေးအရောင်တောက် ခြယ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား တွေးနေတဲ့ မမနဲ့ ညီမလေးများ အခြေအနေနဲ့ အချိန်ခါလိုက်ပြီး ပြင်တတ်၊ ဆင်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ မိတ်ကပ်တွေ ၊ အရောင်တွေ အရမ်းမသုံးမိပါစေနဲ့နော် ။
အသားရည်က ဖြူဖြူ ၊ မည်းမည်း ၊ ညိုညို စိုပြေနေတာလေးဆို သူတို့လွယ်လွယ် သတိထားမိကြသတဲ့။ လူတိုင်း အကောင်းတော့ ကြိုက်တာပေါ့နော်။ မျက်နှာလေး ဝင်းမွတ်ပြီး ပြောင်ချော်နေတာမျိုိးဆိုလည်း သတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေ ၊ အဖုဖိမ့်တွေဆို ယောက်ျားလေးတွေအမြင်မှာ မင်းဟာ အရောင်မှိတ်နေတတ်ပါတယ်။ အရောင်စိုချင် အသားရည်လေးလည်း လှအောင်နေမှရပါမယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေတံသွယ်သွယ်လေးတွေက ယောက်ျားတိုင်းရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲ။
ခြေတံသွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို သူတို့ အရမ်းသတိထားမိလွယ်ပါတယ်။ ခြေတံသွယ်သွယ်လေးကိုမှ စိုဝင်း ချောမွတ်နေတဲ့ ခြေတံလေးပေါ့။ မိန်းကလေးဆိုတာလည်း သန့်ရှင်းနေမှဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်ခြေထောက်လေးကြည့်လိုက်တိုင်း လှနေစေဖို့ သေချာသန့်စင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေကလည်း လွတ်လပ်မှုရှိတာကိုး။ လည်ပင်းကျယ်တဲ့ အကျီ င်္မျိုးတွေ ၊ လက်ပြတ်လေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေ မျက်လုံးထဲ ပိုထင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်နဲ့ အောက် စပ်ဆက်မှုရှိတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကို သူတို့နှစ်သက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မင်းမှာ အကြောပြတ်ရာရှိတယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီလိုအကြောပြတ်ရာကို မြင်လို့ သူစိတ်ထဲလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီလိုအကြောပြတ်ရာ ဖြစ်နေလည်းဆိုတာကို သူတို့သေချာစဉ်းစားနေမှာမဟုတ်သလို ၊ ဒီအကြောပြတ်ရာက သူတို့အတွက် ပိုတောင်ကြည့်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဆဲဆိုရင် အထင်သေးခံရမယ်လို့ လူကြီးတွေက ဆုံးမဖူးတယ်ဟုတ်။
ဆဲတယ် ဆိုတဲ့အရာက ကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခြေအနေပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆဲသံကို သူတို့ သတိထားကြပါတယ်။ စကားပြောတိုင်း ”ေ-ာက် ” ကိုမချတော့တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ပါးစပ်က အမှတ်မထင်ထွက်ကျလာတဲ့ ဆဲသံလေးကို ပြောတာပါ။
၈ဝရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားတွေက ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိန်းကလေးကို မကြိုက်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့်တချို့ ယောက်ျားတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဆေးလိပ်သောက်တာ မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ၊လွပ်လပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ခုလို့ပဲ သူတို့မြင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တိုင်း သူမဟာ မကောင်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လို့ သူတို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲမို့ ဒီလိုပုံစံက သူတို့မျက်လုံးထဲပိုတောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်။
ပြောသွားတဲ့ tips လေးတွေထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေနဲ့ မင်းမှာကိုက်ညီမှုရှိနေပြီလဲ.. တစ်ခုပဲဆိုရင်တောင်တစ်ယောက်လောက်တော့ မင်းကို သတိထားမိတဲ့သူရှိနေမှာပါ..
စိတ်ကစားတာနဲ့ တကယ်ချစ်တာကို မဝေခွဲနိုင်သေးဘူးလား
ခဏတာ စိတ်သာယာမှုနောက်လိုက်ရင်း လမ်းပျောက်သွားတတ်တာတွေ အများကြီးပါ။
သစ်ရွက်လှုပ်တိုင်း ရယ်မောရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဝအတွက် လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရော ၊ နှလုံးနဲ့ပါ သေချာချိန်ထိုးပြီး စဉ်းစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိ တွဲနေတဲ့ရည်းစားပေါ် စိတ်ကစားတာလား ၊ တကယ်ချစ်တာလား မခွဲခြားနိုင်သေးရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သူနဲ့တွေ့ရင် ပျော်တယ်။ ရယ်စရာဟာသတွေပြောတယ်။ လိုချင်တာ ဝယ်ပေး ချစ်ပေးနေရုံနဲ့
ဘဝတစ်ခုကို အတူတည်ဆောက်နိုင်မယ်ထင်လား။ မင်းမမြင်နိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အနေထိုင်အပြုမူတွေကို တစ်သက်လုံးလက်ခံနိုင်ပြီလား ? ဒါတွေလက်မခံနိုင်သေးဘဲ သူ့ကို တကယ်ချစ်ပါတယ်လို့ မပြောပါနဲ့။
တခါတလေ လူတစ်ယောက်ကို အကြာကြီးပေါင်းကြည့်မှ သူ့အကြောင်း အကျင့်စရိုက်တွေ ကောင်း
ကောင်းသိရတာပါ။ တစ်ခုခုဆို သူ့ကိုပြောဖို့ တွေဝေ တုံ့ဆိုင်းနေတုန်းလား ။ ကိုယ့်စိတ်ကို အရင်သိ
အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ်ကိုကိုယ် အရင်နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ ကိုယ်တိုင်တောင် ဘာမှန်းမသိပဲ
ချစ်သူအပေါ်ထိန်းချုပ်ချင်ကြတာ လူတိုင်းပါပဲ။ ငါပြောတဲ့အတိုင်း နေ ၊ ငါသွားသလို သွား ၊ ငါပြောသလိုစားဆိုပြီး ပုံသွင်းချင်လာတယ်။ ဒါက ချစ်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ မင်းရဲ့အတ္တဖြစ်သွားပါပြီ။
တကယ်ချစ်ရင် ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ ဘယ်သူမှတော့ မေတ္တာရှင်ကြီးတွေ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း နှစ်ယောက်ကြား အစိုင်ခဲ၊ အဖုထစ်တွေဆိုတာ ရှိလာမှာပါ။ နားလည်ပေးသင့်တာ
နားလည်ပေးလိုက် ၊ ခွင့်လွှတ်ပေးသင့်ရင် လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ အဓိက နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ချမ်းသာဖို့ပါ။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ မင်းအနေနဲ့ဒါတွေ လက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုရင် သေချာပြန် သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
အခုချိန်ကစပြီး သူ့အပေါ် စိတ်သာယာနေတာလား ၊ တကယ်ချစ်တာလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
Rs တစ်ခုကို သူတို့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်လက်တွဲတဲ့လူက ကိုယ်ဆွဲခေါ်သလို ပါမလာတဲ့အခါ မပျော်ရတော့ဘူး။ မပျော်မှန်းသိရက်နဲ့လည်း ဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွက်အချိန်တွေအကုန်ခံနေကြတယ်။ သူ့ကိုဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှောင်ပိတ်နေကြတယ်။ အချစ်မရှိတော့တဲ့ Rs တစ်ခုကို လက်လွှတ်လိုက်ရမှာ ဒီအချက်တွေကြောင့် လူတွေ ကြောက်ရွံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့ Rs ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါ ယုံကြည်ချက်မရှိတော့အောင် ရိုက်ချိုးပစ်တတ်ပါတယ်။ ချစ်တဲ့သူဆီက ဆိုးဝါးစွာဆက်ဆံခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်ပါ သံသယရှိလာပြီးနောက်ဆုံး ငါဟာ အချစ်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့ လူတစ်ယောက် ၊ ဘာညာ ဆိုပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
– ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါဦး။ ဒါဟာ ဝါဿနာအသစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သင်တန်းတက် ၊ ခရီးသွားခြင်းစသဖြင့် စိတ်ထဲဆန္ဒရှိသမျှ လုပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်ရမှာကိုယ်ပါပဲ။
– ခွင့်လွှတ်တတ်အောင် ကြိုးစား။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်နေတာရပ်လိုက်ပြီးအနာဂတ်ကို တွေးပါ။
– ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရှုံးသမား ၊ အရူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေမပြောပါနဲ့။ နင်ဟာ အကောင်းဆုံးတွေနဲ့
အသက်ရွယ်ကလည်း အတိုင်းတာတစ်ခုထိလောက်ပဲ အရေးပါတာပါ။ အသက်၎ဝကျော်သွားလည်း အချစ်ကို ရှာမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ မပျော်ရတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး တစ်သက်လုံး သေတဲ့အထိ နေသွားမလို့လား။ တကယ့်အချစ်စစ်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာဘဝလေးကို ရော မလိုချင်တော့ဘူးလား။ သူဟာ မင်းကိုမလိုလားဘူးဆိုရင် ဆုပ်ကိုင်မထားပါနဲ့။ လွှတ်ချလိုက်ပါ။ ဒီအခြေအနေထက် မင်းအများကြီး ပိုပျော်ရမယ်လို့ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်။
သမီးရည်းစားဘဝမှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခုကျတဲ့အခါ အဆင်မပြေလို့ ကွဲမယ်၊ ကွာမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံအခြေအနေတွေက ကြည့်ရပါသေးတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ယောက်ျားလုပ်စားထိုင်စားတဲ့မိန်းမတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ကျသွားတာနဲ့ သူ့အပေါ်မျှော်ကိုးနေရမယ်ဆိုလည်း မဖြစ်သေးဘူး။ ကိုယ့်မှာ အလုပ်လေးတစ်ခုရှိနေမှ ရင်ကော့ပြီးထွက်လာလို့ရမှာပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ယောက်ျားအပေါ် မှီခိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲခံ ၊ အပြောဆိုခံပြီး နေနေရမှာပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင် ဝင်ငွေရှိနေသရွေ့ သူ့ကို မင်းအချိန်မရွေးထားခဲ့နိုင်သလို အခြေအနေတွေ ၊ အချိန်ခါတွေ စောင့်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ဂရုစိုက်နေလို့မရပါဘူး။ အဆင်မပြေတော့တဲ့ RS တစ်ခုမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ဆက်နေရင် ကိုယ်ပဲခံရမှာပေါ့။ သမီးရည်းစားအတွဲတွေ ပြတ်သွားရင်လည်း နှစ်အကြာကြီးတွဲပြီးမှ မိန်းကလေးဘက်က နစ်နာသလိုအပြောတွေ ၊ အိမ်ထောင်သည်တွေ ကွဲပြန်ရင်လည်း ယောက်ျားကံကို မကောင်းတာပါဆိုတဲ့ ခပ်ပေါပေါစကားတွေကို ခေါင်းထဲ ထည့်မနေပါနဲ့။ မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိစ္စက မင်းတို့နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားညှိနှိုင်းလို့မရရင်တော့ နည်းလမ်းက တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ​ဝ ကိုယ်လျှောက်ရမှာပါ။ ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမှ မင်းအတွက် ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အာရုံစိုက်တာ မင်းရဲ့ကျရှုံးတစ်ခုပါပဲ။
အနည်းဆုံးတော့ သူက မသောက်တတ်ပါဘူး။ သူ ငါ့ကိုမရိုက်တာပဲ တော်ပါသေးတယ်။ သူငါ့အပေါ် မဖောက်ပြန်တာပဲ တော်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ပျော်စရာမကောင်းတဲ့ Rs ကို လွှတ်လိုက်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး တော်တော်များများက ဒီယောက်ျားမကေင်းပေမယ့် သေချာပြုပြင်ရင်ရနိုင်မယ်ထင်သလို ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စကိုလည်း တော်တော်ကြည့်ကြတယ်လို့ လေ့လာတစ်ခုမှာ ပြောထားပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲတစ်ခုကနေ ရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအတွက် ရေရှည်ကိုတွေးနေကြတာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ဆိုပြီး… သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေ ပြေးမြင်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးချင်တဲ့စိတ်က မင်းကို တွန့်ဆုတ်စေတာပါပဲ။
ကိုယ့်ဘက်ကတစ်စုံတစ်ယောက်ကို အချိန်ကြာကြာပိုးပန်းခဲ့ပြီး လိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘက် ကအခုချိန်ထိ တိကျသေချာတဲ့ အဖြေပြန်မပေးနိုင်သေးတာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်မလဲ။ အချိန်တော်တော်ကြာချစ်နေပင်မဲ့ဘာလို့အဖြေပြန်မပေးနိုင်သေးတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် နည်းစပ်တဲ့ အဖြေ အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်ရသူက ဘယ်လို အချက်တွေကြောင့်ကိုယ့်အပေါ် မတုန့်ပြန်သေးတာလဲဆို တာခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်…
နည်းနည်းတော့တစ်ဖက်စွန်းရောက်တဲ့အတွေးပါ။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်သူတို့ကို အချိန်ကြာကြာချစ်လာခဲ့တာကို မြင်ပြီး သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်မှာပါလေ။ အခုချိန်ထိတောင်အချိန်ကြာကြာချစ်ခဲ့သေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဘယ်အချိန်ပြန်ပေးပေး အဖြေပြန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တွေးထားတဲ့သူမျိုးပါ။ ကိုယ့်ဘက်ကအချိန်ကြာကြာသူ့နားမှာကပ်တွဲပြီးချစ်ကြောင်းပြထားတာကြောင့် ကိုယ့်အပေါ်နည်းနည်းပေါ့နေတာပါ။ကိုယ်သာ သူ့ကို အချိန်ကြာကြာလိုက်နေရာကနေ ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ကိုယ်မရှိတော့မှ ကိုယ့်တန်ဖိုးနားလည်လာကြပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့သူတွေက သူတို့အပေါ်အလေးနက်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ် ငြင်းဆန်ဖို့ခဲယဉ်းတက်ကြပါတယ်။ မိဘချင်းရင်းနှီးတာ မျိုး၊ အပေါင်းသင်းတွေချင်းခင်တာမျိုး အဲ့လို မျက်နှာကြည့်စရာတွေရှိတာကြောင့် မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းဆိုပြီးကိုယ့်အပေါ်တိကျသေချာတဲ့အဖြေမပေးပဲ အချိန်ကြာကြီး ကိုယ့်ဘက်ကတော့မျှော်လင့်နေတက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သဘောကျတဲ့အကြောင်းသူသိပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘက်ကဆန္ဒကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါ။ ငြင်းရမှာအားနာလို့ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းပေးတာမှန်းနောက်ပိုင်းမှသိရင် နာကျင်ရပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို စမ်းတဲ့အနေနဲ့နည်းနည်း အချိန်ဆွဲတက်ပေမဲ့ တစ်ချို့ကတော့ကြွားချင်ရုံသက်သက် အချိန်ဆွဲထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ ငြင်းချင်ရင် မပတ်သတ်ချင်ရင် ချက်ချင်း ရှောင်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိကြပေမဲ့ လူအများအကြား ၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းကြားမှာ တစ်ယောက်ယောက်က အချိန်တော်တော်ကြာကြာစောင့်ပြီး Crushနေတာကို ကြွားချင်ကြတာမျိုးပါ။ ကိုယ့်ကို ချစ်တာမဟုတ်ပဲကိုယ်ချစ်တာရဲ့ဂုဏ်ကို လိုချင်တာကြောင့် မချစ်ပဲကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတက်ကြပါတယ်။
(၄) ကိုယ့်ဆီကအရာတွေကို မက်မောလို့
ကိုယ့်ဆီကအရာဆိုတာ တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကိုယ်ပေးတဲ့ ကြင်နာမှုတွေနားလည်မှုတွေကို အချိန်တော်တော်ကြာကြာခံစားလာရတာကြောင့် အစိမ်းသက်သက်ကြီး လည်းမငြင်းချင် ချစ်လားဆိုတော့လည်း မသေချာပဲဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးတွေက ကိုယ့်အချစ်ကို လက်ခံဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတာကြောင့် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့မေတ္တာ မပျက်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်သဘောကျရင် ကျတဲ့အကြောင်းသေချာသိအောင်ပြောပါ။ ကိုယ့်ဘက်ကသဘောကျသလိုလို သာမန်ခင်သလိုလို ဘာမှန်းသေချာမသိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အချိန်ကြာကြာမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘက်ကသေချာမှုမရှိတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကို သေချာမသိပဲ အချိန်တွေသာကြာသွားမယ် ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးက တိုးတက်မလာနိုင်ပါဘူး။
တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထားတဲ့မေတ္တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး စစ်မှန်တဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေသာ ပြန်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း